I-Cold War crossword #1
I-Cold War crossword #2
I-Cold War crossword #3
I-Cold War crossword #4
I-Cold War crossword #5
I-Cold War crossword #6
Amagama asemakhondweni e-Cold War
Imibhalo yeCold War
Cold War imibuzo eseyi
Izazi-mlando zeCold War
Cold War mlando
Imibuzo yememori ebandayo ebandayo - imicimbi ye-1945 kuya ku-1950
Imibuzo yememori ebandayo ebandayo - imicimbi ye-1950 kuya ku-1959
Imibuzo yememori ebandayo ebandayo - imicimbi 1960-1979
Imibuzo yememori ebandayo ebandayo - imicimbi ye-1980 kuya ku-1991
Imibuzo yememori ebandayo ebandayo - amaqembu
Imibuzo yememori ebandayo ebandayo - abaholi
Imibuzo yememori ebandayo ye-Cold War - imigomo nemiqondo (I)
Imibuzo yememori ebandayo ye-Cold War - imigomo nemiqondo (II)
Quizzes Memory Cold War
Cold War movie ne-TV
Imibuzo yeCold War #1
Imibuzo yeCold War #2
Imibuzo yeCold War #3
Imibuzo yeCold War #4
Imibuzo yeCold War #5
Imibuzo yeCold War #6
Imibuzo yeCold War #7
Imibuzo yeCold War #8
Quizzes War War
Izingcaphuno Zempi Yomshini
Izihloko zeCold War
Cold War ubani
ICold War wordsearch - imiqondo
ICold War wordsearch - imicimbi
ICold War wordsearch - amaqembu
ICold War wordsearch - abantu
ICold War wordsearch - izindawo
ICold War yama-wordsearches
Impi Ebandayo kwakuyisikhathi eside sokungaboni ngaso linye namazwe omhlaba phakathi kwe1945 ne1991. Kwakuphawuleka umbango omkhulu phakathi kwe-United States, iSoviet Union kanye nababambisene nabo.
Ibinzana elithi 'impi ebandayo' laqanjwa ngumbhali uGeorge Orwell, owathi ngo-Okthoba 1945 wabikezela isikhathi "sokuqina esabekayo" lapho amazwe anamandla noma ama-blocs omfelandawonye, ​​ngamunye enamandla okubhubhisa elinye, enqaba ukuxhumana noma ukuxoxisana.
Ukubikezela kuka-Orwell okuqondile kwaqala ukubonakala ku-1945. Njengoba iYurophu yayikhululwa kubushiqela bobuNazi, yathathwa yiSoviet Red Army empumalanga kanye nabaseMelika kanye nabaseBrithani entshonalanga. Engqungqutheleni zokushiswa kwekusasa lempi yangemva kwempi Europe, kwavela ukungezwani phakathi komholi weSoviet UJoseph Stalin kanye nabalingani bakhe baseMelika nabaseBrithani.
Maphakathi ne-1945, amathemba wokubambisana kwempi yangemva kwempi phakathi kweSoviet Union kanye namazwe aseNtshonalanga ayesephelile. Empumalanga ye-Europe, abameli beSoviet baphoqelela amaqembu ezenhlalo yabasebenzi embusweni, okwenza ukuba usopolitiki waseBrithani Winston Churchill ukuxwayisa ngeI-Iron Curtain”Kwehlela eYurophu. Izwe laseMelika lasabela ngokwenza lokho I-Marshall plan, iphakethe losizo lweminyaka eyizigidi ezingama- $ 13 billion ukubuyisela ohulumeni base-Europe kanye nezomnotho. Ngama-1940 aphela, ukungenelela kweSoviet kanye nosizo lwaseNtshonalanga kwase kuhlukanise iYurophu yaba blocs ezimbili.
Imephu ekhombisa ukuhlukaniswa kweYurophu phakathi neMpi Yomshoshaphansi
Esihlokweni salokhu kwahlukaniswa emva kwempi Germany, manje enamacembe amabili futhi inhloko-dolobha yayo iBerlin ithathwa amandla amane ahlukene.
E-1948, amaSoviet naseMpumalanga Jalimane azama faka indlala amandla aseNtshonalanga eBerlin bathintwa yindiza enkulu kunazo zonke emlandweni. Ku-1961 uhulumeni we I-East Germany, ebhekene ne-a ukuphuma kwabantu abaningi bakhona, wavala imingcele yakhe futhi wamisa umgoqo wangaphakathi edolobheni elihlukaniswe yiBerlin. The Berlin Wall, njengoba yayaziwa, yaba uphawu oluhlala njalo lweMpi Yomshoshaphansi.
Izimpi ezibandayo zaqhubeka nokusabalala kwemingcele yeYurophu. Ngo-Okthoba 1949, i-China Revolution yaphetha ngokunqoba kukaMao Zedong neqembu lamaKhomanisi laseChina. I-China yathuthuka ngokushesha futhi yaba amandla enuzi, ngenkathi ukusongela kobukhomanisi kwashukumisela ukuqashelwa kweMpi Yomshoshaphansi eya e-Asia. Ku-1962, ukutholakala kwe Imicibisholo yaseSoviet esizweni esisesiqhingini saseCuba kwacindezela iMelika kanye neSoviet Union ekuqothulweni kwempi yenuzi.
Le micimbi ivuselele izinga elingakaze libonwe lokusolwa, ukungathembani, ukuphoxeka kanye nokugcina izimfihlo. Ama-ejensi afana neCentral Intelligence Agency (CIA) ne Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) andise abo imisebenzi yokusitha emhlabeni wonke, ukuqoqa imininingwane ngamazwe ezitha kanye nemibuso. Baphinde bangenelela kwezombusazwe zezinye izizwe, bekhuthaza futhi behambisa ukunyakaza komhlaba, ukuvuka, coup d'etats nezimpi zommeleli.
Abantu abavamile bayibona iMpi Yomshoshaphansi ngesikhathi sangempela, ngokusebenzisa eyodwa ebaluleke kakhulu imikhankaso yenkulumo-ze emlandweni wesintu. Amanani weCold War kanye neparanoia yenyukliya yangena kuzo zonke izici zesiko elidumile, kufaka phakathi ifilimu, ithelevishini futhi umculo.
Iwebhusayithi ye-Cold War eyaziwa nge-Cold War iyinsiza ebhaliwe yezincwadi ezisezingeni eliphezulu yokufunda ukungezwani kwezepolitiki nakwezempi phakathi kwe1945 ne1991. Iqukethe cishe imithombo ehlukile ye-400 ehlukile nesekondari, kufaka phakathi imininingwane izihloko ezifingqiwe, amadokhumenti, izikhathi, glossaries futhi izindaba zomuntu. Abafundi abathuthukile bangathola imininingwane nge-Cold War umlando futhi izazi-mlando. Abafundi bangaphinde bahlole ulwazi lwabo futhi bakhumbule ngohlu lwezinto ezenziwa online, kufaka phakathi kwakha, emaphazili futhi ukubekwa kwamagama. Imithombo eyisisekelo eceleni, konke okuqukethwe Kumlando we-Alfa kubhalwe ngothisha abaqeqeshiwe nabanolwazi, ababhali nezazi-mlando.
Lesi siza se-Cold War siqukethe izindatshana, imithombo kanye nemibono emicimbini yomhlaba wonke kanye nokungezwani phakathi kwe-1945 ne-1991. Lesi siza senziwe Umlando we-Alpha futhi siqukethe amagama we-308,862 kumakhasi we-405. Ngeminye imininingwane, vakashela eyethu Ikhasi le-FAQ or Imigomo Yokusebenzisa.